Maraoka, Israely ary Palestina : Tantara Iray Tsy Manam-paharoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2018 7:32 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, বাংলা, Español, Ελληνικά, English
60 taona lasa izay, nanombohan'i Nakba sy fitakian'i Israely ny fahaleovantenany lasa nanana fifandraisana mahaliana i Israely sy Maraoka. Talohan'ny nananganana ny fanjakana Israeliàna, nanana mponina Jiosy maro, no sady nihanaka be i Maraoka. Nandritry ny folo taona nahazoan'i Israely ny fahaleovantenany anefa, maro be ny tahan'ireo Jiosy Maraokanina nifindra monina tao Israely. Ankehitriny, i Maraoka no mahazo ny laharana voalohany amin'ny fananana fifandraisana tsara indrindra amin'i Israely raha oharina amin'ireo firenena manaraka ny fivavahana silamo, amin'ny lafiny iray noho ny ezaka nataon'ilay Mpanjaka Hassan II hampanjaka ny filaminana tao amin'ny faritra. Kanefa, eo amin'ny sehatry ny fifandraisana ara-diplaomatika, misafidy an'i Palestina ny ankamaroan'ny olona. Ireto misy hevitra vitsivitsy avy amin'ireo Maraokanina bilaogera momba izany, ny tsingerintaona faha-60 nahazoan'i Israely ny Fahaleovantena.
Hisham avy ao Al Miraat / The Moroccan Mirror dia mitsetra ny zavatra iainan'ireo Palestiniana, kanefa manana fanantenana :
Enimpolo taona taorian'ny Nakba, mampalahelo be ny sary asehon'i Palestina, raha tsy hilaza afa-tsy izay. Nefa tao anatin'ny folo taona farany na mihoatra, vavolombelon'ny fiovàna sy fifohazana teo amin'ny sehatry ny fitsarana sy ny fandriampahalemana ary ny faharavàn'ireo fadifady goavana izay nisy hatreto aloha isika, tamin'ny fanampiana an'i Israely hiàla tamin'ireo heloka bevava fanaony tsy amin'ny Palestiniana fotsiny ihany fa amin'ny fitsaràna sy ny Tantara ihany koa.
Maro ny soritra fanantenana hita. Efa mihalefy ny fiarovana ny omerta sy ny fampihorohorona ara-tsaina. Mihamaro hatrany koa ny olona sahy maneho hevitra, ary efa mihena tsikelikely koa ny fiarovana atolotry ny “lobby” Israely.
Hoy izy nanampy avy eo :
Ny hinoan'ny maro ankehitriny dia ny hoe : “oh, aoka izay, efa lasa ny zavatra taloha, efa tsy misy miraharaha an'izany intsony, tsy nahomby izany, efa fantatry ny maro ny fomban'ny Amerikana sy ny Israeliana, ka aoka izay ny havendranana, izay ilay izao tontolo izao, tsy misy azo atao amn'izany sady ****, iza no miraharaha ?” Kanefa avelao aho hiteny hoe-mbola mijery antsika ireo nodimandry, miandry antsika hanatanteraka ny rariny.
Tsara kokoa ho anao ny mitàna ny fanantenana ary mitsiky ho an'i Palestina!
Ny atin'ny Sinagoga ira ao Sefrou, Maraoka
Abdelilah Boukili ao amin'ny Fanehoankevitra Tsy Tapaka Mifototra amin'ilay fandaharana “Haveyoursay” () an”ny BBC World dia maniry an'i Israely mba ho tsara fitondrantena :
Mila fahaterahana politikam-pilaminana marina ho an'ny olona tsirairay ny ao Afovoany Atsinanana mba hahafahan'ny olona miaina am-pilaminana. Raha toa ka manisa ny taona nahaterahany i Israely, ny hafa manisa ny maty nampiaininy an'i Palestina, mampitovy ny roa tonta amin'ilay sarimiaina Tom sy Jerry, mba hihomehezana fotsiny na hiresahana matotra momba azy io.
Ny azo antoka aloha. Efa zavamisy izao i Israely. Zavatra efa vita ilay izy, na tian'ireo fahavalony na tsy tiany. Nefa mila mampiseho hamailoana ihany izy satria efa miha-mahazo toerana matanjaka izao ny Palestiniana. Ny fitrandrahany ny halemeny ho ainga vao miaraka amin'ireo politikany feno jadona dia vao maika hampaharitra ny fifandirana misy ankehitriny.
Koa ndeha isika hanantena hoe amin'ny tsingerintaonany manaraka , Israely ho tonga firenena ahitàna sisintany fantatra manerantany ary ny Palestiniana hanana ny fanjakany afaka fa tsy hahatsiaro ho gadra faoben'i Israely foana.
Vaovao mitohy amin'izay, A Moro in America nanao fanamarihana momba ny hetsika fizahantany eo amin'i Maraoka, Israely, ary Espaina :
Tetikasa ara-pizahantany iray mampifandray an'i Israely, Maraoka ary Espaina no hampahafantatra ny dian-tongotr'i Rambam (Maimonedes), filozofa sy mpahay Torah tamin'ny taonjato faha-12.
Nasain'i Tzemach ny Minisitry ny Fizahantany Maraokanina Muhammad Bushid, ny Alatsinainy 12 May 2008, mba ho any Israely hidinika sy hamakafaka ny fiarahamiasa hahafahana manangana fitezam-paritra miainga amin'ny tantaran'i Rambam.
Natolotra teo anoloan'ny Ministeran'ny Fizahantany Maraokanina nandritry ny Euromed ny fifanarahana ara-pizahantany iray eo amin'ireo Minisiteran'ny Fizahantany eo amin'ny Faritra Eropeana sy Mediteraneana natao tao Parisy tamin'ny volana Marsa 2008. Samy naneho fahavononana hitondra fanohanana ilay tetikasa daholo ireo Minisitra rehetra ireo.
Sary nampiasàna ny lisansa Creative Commons, nalain'i Omer Simkha